Iindawo ezilungileyo zokutyelela e-UK
January 11, 2022 IShubham Sharma izinto zokwenza, UK
I-United Kingdom yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eYurophu. I-United Kingdom iquka iNgilani, iSkotlani, iWales, kunye neNorthern Ireland. Zininzi iindawo ezinomdla zokukhangela e-Uk. Ukusuka kwiyantlukwano yenkcubeko ukuya kukuluma umlomo
Yeyiphi eyona bhanki ilungileyo e-UK?
January 10, 2022 IShubham Sharma imali, UK
Icandelo lebhanki e-United Kingdom kukholelwa ukuba lelona likhulu eYurophu kunye nelesine ngobukhulu emhlabeni. Ibhanki e-United Kingdom iphuhliswe kakuhle, kunye namangeno amatsha aphenjelelwa bubuchwephesha bokusika kunye nobuchule. Yi
Uyifumana njani i-visa e-UK?
January 7, 2022 IShubham Sharma UK, ivisa
Ukuba ubuhamba nge-UK usendleleni eya kwelinye ilizwe, unokufuna i-visa, umzekelo, ukuba une-layover phakathi kweenqwelomoya. Inkqubo yesicelo se-visa yase-UK kunye neenkonzo ekufuneka uzisebenzise xa ufaka isicelo
January 4, 2022 IShubham Sharma imisebenzi, UK
I-UK inoqoqosho lwesithathu ngobukhulu eYurophu. Kwaye kwakhona izinga lentswelo-4 ekhulwini. Ekupheleni kukaJulayi 2018 kunye neyona ndawo iphantsi edibeneyo ukususela ngo-1975. Kukho kwakhona ngaphezu kwe-3.5 yezigidi zabemi abangengabo base-UK abaqeshwe. Kuba kwakukho abanye abangama-74,000 XNUMX
IVisa yase-UK yamaIndiya !!
Novemba 29, 2021 IShubham Sharma hamba, UK, ivisa
Ukuba unqwenela ukuya e-UK, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufaka isicelo se-visa. Njengoko i-intanethi inefuthe elikhulu kwihlabathi lanamhlanje, uninzi lomsebenzi onxulumene ne-visa wenziwa kwi-intanethi. Nawuphi na umntu osuka
Faka isicelo sendawo yokuhlala e-UK
Oktobha 22, 2021 UAntika Kumari Ukholo, ababaleki, UK
Ukufuna indawo yokukhosela lilungelo lomntu, elixhaswa yi-United Nations Refugee Convention kwaye yamkelwa yi-UK. E-UK, i-Ofisi yezeKhaya, isebe likarhulumente, yenza izigqibo zendawo yokufihla intloko. Inkqubo ye-asylum inokuba nzima kakhulu,
Uyifumana njani iVisa yaseRussia esuka e-UK?
Oktobha 4, 2021 UAntika Kumari UK, ivisa
Kwiintlobo eziqhelekileyo zokuhamba, eli phepha limele urhulumente wase-UK ulwazi ngezithintelo ezikhoyo ngoku kwabo bahamba ngepasipoti epheleleyo "yaseBritish Citizen". Urhulumente wase-Russia umisela kwaye unyanzelisa imigaqo yokungena. Nxibelelana nozakuzo, ikhomishini ephezulu, okanye umzi wommeli
Ibrashi yamazinyo eMandla e-UK
Ngamana 6, 2021 UMaitri Jha izinto ukuthenga, UK
Nangona iibrashi zamabhinqa zemveli zenza umsebenzi olungileyo wokucoca amazinyo. Ke kutheni ufuna iibrashi zamazinyo zombane ukucoca amazinyo akho? Ibhulashi yamazinyo yombane isebenza ngakumbi kwaye icokisiwe. Ibhrashi yamazinyo yombane iya kukunceda ususe ukuya